Ny antsipiriany rehetra momba ny Jailberak ho an'ny iOS 10.1.1 | Vaovao IPhone
Ny kinova farany an'ny Jailberak dia eto, na izany aza, ary raha ny marina, vitsy sy vitsy kokoa ny misafidy ireo fepetra ireo hitrandrahana ny marefo amin'ny iOS, ary ny fitomboana sy ny fisokafan'ny rafitra avy amin'ny iOS 8 ka hatramin'ny iOS 10 no mahatonga fahatsapana ny fanatanterahana an'io karazana fampiharana io, indrindra noho ny fanoloran-tena amin'ny fiarovana sy ny fampidirana ireo fiasa ireo, izay ampiharina amin'ny rafitra miasa. Azo antoka, Jailbreak for iOS 10.1.1 dia misy izao, ary ireto ny andinindininy tokony ho fantatrao alohan'ny hametrahanao tanana amin'ny iPhone anao.
Araka ny efa nolazainay teo aloha, Manararaotra ny faharefoana ao amin'ny rafitra iOS 10.1.1 izy ireo ary ny fidirana amin'ny alàlan'ny fanararaotana antsoina Tetikasa Zero. Eo amin'ny faran'ny lahatsoratra, dia hahita rohy mankany amin'ny fanazavan'ilay mpamorona sy ireo dingana arahinao hampiasaina amin'ny fitrandrahana ianao, natolotra ho an'ny manam-pahaizana manokana. Ka raha fintinina dia manararaotra fotsiny izy ireo amin'ny fidinana fiarovana, izay araka ny takatsika dia voavaha ao amin'ny iOS 10.2, satria ny Jailbreak dia tsy navoaka ho an'ity kinova farany an'ny rafitra fiasa ity. Tapitra ny fotoana nahatongavan'i Jailbreak tamin'ny fotoana niarahana tamin'ny kinova ofisialin'ilay rindrambaiko farany. Ian Beerg no nandefa tao amin'ny tranokala "Chromium.org" izay fahalemena tokony hararaotintsika mba Jailbreak ny fitaovantsika.
Na izany aza, toa miha manjavozavo ny zava-misy amin'ny fanatanterahana ny Jailbreak, satria mila fahalalana ara-teknika bebe kokoa. Ny mpampiasa iOS antonony dia mety tsy ho afaka jailbreak. Raha ny fahitan'ny mpampiasa azy dia tsy maintsy miandry isika raha toa ka mahavita mampihatra fitaovana izay manao ny asa rehetra ho antsika izy ireo. Raha fintinina dia toa saika maty ity Jailbreak ity, ny fahasarotan'ny fahatanterahany ary koa ny fanampiana kely azony avy amin'ireo mpamorona toa an'i Luca Todesco, izay mino miha sarotra ny mihazona ilay rafitra, mahatonga antsika tsy hatoky izany. Tsaroanay fa raha hanatanteraka ny Jailbreak dia ilaina ny mandeha amin'ny iOS 10.1.1 ary ny kinova farany azo zahana an'ny iOS dia 10.2, noho izany dia mila mihena ianao.
Ahoana ny fampiasana ny marefo amin'ny fidirana amin'ny root
Noho io mekanika io dia azontsika ilay antsoina hoe "fidirana faka" amin'ny fitaovana, izay manokatra varavarana ho amin'ny fampivoarana fitaovana ho avy, na amin'ny fampiasana fidirana raha manana fahalalana ampy ianao.
Raha fantatrao ny momba ny rindrambaiko sy kaody amin'ny alàlan'ny Xcode ary mahareta be dia azonao atao ny manararaotra an'io fomba io hametrahana Cydia avy eo. Tsy maintsy manaraka ny dingana tsirairay ianao ary ampahafantaro anay, avy amin'ny Actualidad iPhone, fa tsy tompon'andraikitra amin'ny fampiasana omenao izahay.
MANAIKY NY TUTORIAL HAMPIASA NY iOS 10.1.1 FAMPANDROSOANA AZY
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Ny antsipiriany momba ny Jailberak ho avy ho an'ny iOS 10.1.1
Aiza ny marefo? Raha misy efa nahazo jailbroken na nahita ireo marefo dia zarao, misaotra.
Emilius dia hoy izy:
Ny milaza fa efa eo ny jailbreak satria namoaka fanararaotana ry zareo, toa hadalana amiko izany.
Satria fantatsika rehetra fa mila fanararaotana mihoatra ny iray ny fanaovana Jailbreak
Na eo aza izany, hiandry hatrany izahay.
Valiny amin'i Emilius
Fampianarana K&N dia hoy izy:
Ry namako, tsy fanararaotana fotsiny io fa ny fahalemena lehibe indrindra, izay mahafantatra ny fomba fampandehanana azy, dia efa mamela ny fidirana amin'ny root amin'ilay fitaovana, izany hoe, azo alefa ny telefaona fa nalefa mba hamenoana ny fampiasana ny Cydia, izay no ny iray amin'ny maha-mpampiasa mahazatra azy dia liana satria amin'izao fotoana izao dia misy fidirana amin'ny faka ho an'ny mpamorona hizaha toetra ny fampiharana azy ireo, izany no antony nanokafana azy an-karihary mba hahafahan'ny ekipa na ny mpamorona manampy azy ireo ary ho zavatra azon'ny mpampiasa fahalalana fototra atao manana ilay antsointsika hoe Jailbreak
Valiny amin'ny Tutorials K&N
Teraka "saika maty" ny jailbreak noho ny fahalalana tokony hananana? Toa hadino ilay juggling izay tsy maintsy natao tamin'ny kinova iOS taloha hanaovana ny jailbreak, ny fidinana ifotony, ny fanovana ny bootloader ary ny hafa.
Sarotra kokoa ny miditra amin'ny "root" amin'ny alàlan'ireto dingana ireto Gastón, minoa ahy hahaha.
Any no anananao: https://bugs.chromium.org/p/project-zero/issues/detail?id=965#c2
Mora be izany! @. @
Miarahaba an'i Diego!
Dávid dia hoy izy:
Eo moa!!! Miaraka aho, toa manjaitra sy mihira
Mamaly an'i DAvid
Efrain dia hoy izy:
Afaka mampiasa mac fotsiny ve ianao? (ho an'ny fanontaniana Xcode)
Valiny tamin'i Efrain
Ny azo tratrarina dia ny fidirana Root fa tsy ny Jailbreak fantatsika amin'ny Cydia, satria tsy misy fitaovana. Na dia afaka miaraka amin'ny fahalalana ilaina aza ianao.
Aiza ny antsipiriany? satria ny hany nomenao dia hoe ho an'ny 10.1.1. Tsy nafanainao akory ny lohanao
Valiny tamin'i Aurelio
Manana rohy mankany amin'ny kaody sy ny dingana tokony hatao ianao mba hahazoana fidirana Root.
Salama Ibá, izay misy dia fanararaotana manokatra varavarana ho an'ireo izay manana fahalalana ampy, satria tsy misy fitaovana Jailbreak azon'ilay mpampiasa tsotra araraotina.